NY RAHARAHAN’NY ZANA-DRAMILY · L'Homme, son aura et son évolution
> NY RAHARAHAN’NY ZANA-DRAMILY
Classé dans : — cyrius @ 11:57
Mpifamofo i Zana zana-dRamily sy i Leninona, ela nifampitaritarihana ka hiroso amin’ny raharaha, toy izao ary ny dinik’izy roa momba ny lanonana mandritry ny fanambadiany :
Hasaina daholo ny fianakaviantsika izay tratra antso rehetra na avy aiza na avy aiza.
Hasaina hatramin’ireo monina any ampitan-dranomasina, hatrany Atsinanan’i Japana ka hatrany Andrefan’i Eoropa, hasaina daholo.
Ekenao sa tsia.
tena izany mihitsy, hasaintsika hatramin’ny any ankoatra aza raha aza atao.
Hay , hataoko hoe hevitrao izany iny, ekena ny hevitrao, manaraka an’izany.
Ny sakafo amin’io atao tsy lany laniana voky daholo ny nasaina, mbola misy ambiny.
Vonoina daholo, na omby na kisoa na gisa na vorontsiloza, tsy te hahalala isika raharaha tsy misy toa an’io.
tena tsara izany
Hay, hataoko hoe hevitrao indray izany iny, ekena ny hevitrao, fa ny zava-pisotro asiako resaka kely,
mila mamo daholo ny mpanatrika rehetra, toaka à gogo sigara à gogo revy be tsy lany laniana amin’io, misotro daholo izay te hisotro.
Ka hanafatra toaka amin’ny barila isika izany sa amin’ny siterna ?
tsy raharahantsika izany na amin’ny barila na amin’ny siterna, mila mamo ny nasaina, mila toaka be tsy lany laniana isika, atao misy fameriny.
Mety aminao sa tsy mety ?
Hay, tsara be, hataoko hoe hevitrao indray koa iny izany, ekena ny hevitrao, dia ny amin’ny alim-pandihizana, hiantsoantsika an’ireo mpihira mafana kalazalahy sy kalazavavy eto an-tanàna sy any ivelany mihitsy, halaintsika avokoa na mpampandihy kaoitry na mpiandihy salegy, na batrelaka.
hantsointsika daholo izao mpikosoka kapila malaza rehetra izao, hasaintsika kosehiny daholo koa izao kapila rehetra izao, na ireo kapilan’ny tafon-tranontsika, na ilay havanareo kapila iny, asaintsika kosehiny ao amin’ny trano fidiovana ao.
Kapila mangirana anie no kosehin’ireny e
Tsy maninona izany e, ny an’ireny rehefa kapila kosehiny daholo daholo, amin’izay koa ireo mangirana tsara daholo, ilay havanareo iny koa anie mangirana be ny handriny e, asaina kosehiny iny.
Tsy maninona rehefa izay no hitanao fa mety e.
Hay, rehefa hoe tsara dia hataoko ho hevitrao indray iny izany ah, ekena ny hevitrao, fa ny amin’ireo vahiny hasaina ireo ah, isika daholo no miantoka ny fitafiana hanaovan’ireo amin’ny raharahantsika, tsy mila mitondra kanjo ireo miala any.
Raha azoko izany dia miboridana be daholo ireo miala avy any amin’ny misy azy tsirairay avy any ?
Ie, miboridana be daholo ireo fa aty vao miakanjo, isika no miantoka ny akanjony, akanjo tonga dia amin’ilay hiaka farany daholo ary ilay malaza indrindra any ivelany ireny mihitsy.
Asehontsika mihitsy hoe mahavita isika e.
Hay, ekenao koa iny izany a, tsy maninona fa ataoko hoe hevitrao daholo izany, ekeko ny hevitrao, fa ny ahy ity ihany no mba hevitro, ianao daholo no miantoka ny lany rehetra amin’io fety manan-daza indrindra io.
Tantara noforonina ity ka raha misy mpandray anjara mitovy aminao na amin’ny havanao na ny vadinao, na amin’ny deuxième bureau-nao, na amin’ireo olom-pantatrao, fantaro fa kisendrasendra fotsiny no anton’izany fitoviana izany.
Tantara mitohy poritra te hivoaka ho boky ity, lafo nefa ny vidin-taratasy sy ny vola hotakian’ny trano fivoaham-boky.
Mety hivoaka an-tsokosoko amin’ny fomba hafa angamba, ohatra hoe an-tsarimiaina, raha tsy izany mety hahita fomba hafa angamba ianao, lazao kely hoe.